प्रचण्डले आउने चुनावमा माओवादीलाई १ नम्बर पार्टी बनाउछु त्यसै भनेका रहेनछन्, दशैंको मुखैमा खुमलटारबाट बाहिरियो यस्तो मास्टरप्लान ! - माडी खबर
प्रचण्डले आउने चुनावमा माओवादीलाई १ नम्बर पार्टी बनाउछु त्यसै भनेका रहेनछन्, दशैंको मुखैमा खुमलटारबाट बाहिरियो यस्तो मास्टरप्लान !
माडी खबर calendar_today २७ असोज २०७८, 12:47 pm
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउने चुनावमा माओवादी केन्द्रलाई १ नम्बर पार्टी बनाउछु भनेका थिए । त्यस्तो भन्दैं भाषण गरेको केही दिन नबित्दैं खुमलटारबाट आगामी चुनावको आक्रामक रणनीति बाहिरिएको हो ।